Black Hat Marketing uye Nei Ichikosha Kuzvidzivirira Iyo - Dzidzira kubva Semalt
Black Hat SEO ndeimwe yenzira dzakaipa dzekutengesa. Kufugama kwemashoko makuru, kutenga mabhuku uye vateveri, nyaya yekutsvaga, nekudhura matanho ako hazvibvumirwi ne injini dzekutsvaga . Zvinosuruvarisa, vakawanda vema webmasters vanobatanidzwa muhomwe yemaoko SEO uye havazivi kunyange kuti nzvimbo dzavo dzichapiwa chirango kana kurambidzwa neGoogle, Bing, uye Yahoo.
Michael Brown, uyo Semalt nyanzvi, anoti kana iwe uchiramba uchigamuchira maimeri asina kukumbirwa uye uri kunyengerwa neshamwari dzekugarisana nevamwe, ino ndiyo nguva yekuchinja maitiro ako ekutengesa. Kana iwe ukaramba kubvisa kusununguka kubva pane dhesi kana kuti peji yepawebsite yako, iwe unogona kunge uri kupesana nemitemo nemitemo ye Federal Federal Commission.
Kana iwe uri naïve, iwe haugoni kubudirira paInternet. Kunyange zvazvo maitiro matsva eSeO uye masangano ehupfumi evanhu angatungamira injini dzekutsvaga uye Facebook kuti dzivhare mapurogiramu ako, pane mikana yokuti iwe uchaiswa mushure mezvipfeko kana uchiramba uchiita maitiro matsva e SEO. Wadii kusarudza hovha yakachena SEO iyo iri nani zvikuru uye nzira yakagadziriswa yekuwana yakaisvonaka yekutsvaga injini yepamusoro. Dzidzai mazwi nemamiriro ezvinhu anopoteredza email kutengesa uye kuvadzidzisa nehanya zvikuru.
Dzivisa Kukohwa kweCraigslist
Zvakakosha kudzivisa craigslist kukohwa zvakasiyana-siyana.Vanyori veSeO vakasiyana vanoziva kuti mabhizinesi avo haagoni kupona paIndaneti pasina masimba uye ane simba ekutsvakira mano ekugadzirisa maitiro. kwete sekunge iwe uchirwisana nayo, sezvo iwe unogona kurasika mukurumbira wako paIndaneti.Makumi ezviuru zvemazana emapeji ane indexed zuva rega rega, uye injini dzinotsvaga dzinogona kukurumidza kuona kuti ndiani ari kutarisa craigslist Haufaniri kukanganwa kuti craigslist ine boka rakatsaurirwa magweta avo varipo kuti vagadzirise zvinetso zvose zvepamutemo, saka iwe haufaniri kudzivisa.
Usatenga Email Lists
Vanhu vazhinji vanobatanidzwa muhomwe yakasviba SEO vanotenga mazita ema email kubva kune vatengesi vakasiyana-siyana uye pamisika. Vimba neni, haisi tsika yakanaka uye inogona kuparadza nzvimbo yako paIndaneti. Nokudaro, zvinokosha kuti usatenga mabhii emaimeri kunyange kana mari yavo isingadhuri. Pane kudaro, unofanira kukwezva vanhu kuti vanyora mabhuku enyu ezvinyorwa uye zvinyorwa kuburikidza nenzira dzepamutemo. Pasinei nokuti uri kutamba bhizinesi guru kana bhizinesi duku, haufaniri kutenga email nekutengesa mazita kubva kune zvisingazivikanwi. Pane kudaro, iwe unofanirwa kuumba mazita ako uye kutumira maeils kune vatengi vako uye makambani chimwe nechimwe.
Unofanira kugara uchiyeuka kuti hapana nzira shomanana yekubudirira. Saka, hapana chikonzero chekunyengedzera paInternet sezvo kutsvaga injini kunogona kukusunga iwe nyore nyore. Pane kudaro, iwe unofanirwa kusarudza maitiro matsvuku e SEO kuti utakure motokari kuwebsite yako. Wedzera nhamba yako yevanyoresa kuburikidza nemutemo uye mvumo yakarurama. Muchidimbu, haufaniri kufunga kuti kunetsa zvitsva zvekutsvaga kana hutano hwemagariro zvinogona kukuchengetedza paIndaneti nokuti hazvisi izvo.
Kana zvichitaura kumusana wekuda SEO uye kuendesa kwepaimeri, unofanira kuziva zvidzidzo zvekuti nei zvichifanira kudziviswa. Usatenga maail e-mail kubva kune ani zvake, uye usambofa wakatsvaga zvinyorwa zvako kuti uve nechokwadi chekuchengetedzwa kwewebsite nekuchengeteka Source .